जानौँ हाँस्दा हुने ५ फाइदाहरु - LiveMandu
आजको ब्यस्त दुनियाँमा मानिसलाई दौड धुप गर्नु नै सास्ती छ, उनीहरु भविष्यको पछि कुद्दा कुद्दै बर्तमान आवस्यकता भुल्न थालिसकेका छन । जमानाको परिर्वतनसंगै मानिसको मानिसले आफ्नो अत्याबस्यकिय कार्यहरु समेत मानिस गर्न सकेको छैनन । त्यस्तै मानिसहरु हाँस्न पनि विर्सिन थालेका छन भने कति पयले हाँसोलाइ केवल एक खुसीको आधार मात्र पनि मान्ने गर्दछन । मानिसहरुलाई थाहा पनि नहुन सक्छ हाँस्न कति आवस्यक छ भन्ने कुरा आउनु होस हामी हाँस्दा हुने फाइदा हरुको बारेमा केहि कुरा गरौं ।
ब्यायामले शरिर स्वस्थ्य हुन्छ तर मनको ब्यायाम हाँसोले गर्दछ । जव हामी हाँस्छौ तव हाम्रो शरिरमा एण्डोफ्रिन नामक हर्माेन पैदा हुन्छ जस्ले मुटुलाई स्वस्थ राख्ने कार्य गर्दछ । त्यसैले हाँसी खुसी रहने मानिसलाई हृदय सम्बन्धी समस्या कम हुने सम्भावना रहन्छ ।
हाम्रो शरिरमा अक्सिजनको कमिले विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दछन यदि हामी हाँस्ने हो भने शरिरमा अक्सिजनको मात्रामा शरिरमा सहजै प्रवाह भई प्रतिरक्षा प्रणाली पनि मजबुद हुने कुरामा डाक्टरहरु जोड दिने गर्दछन ।
विहानीको समयमा शारिरीक ब्यायाम गर्दा हाँस्नु निकै लाभदायक मानिन्छ यस्ले मानिसलाई दिनभर खुसी रहन मद्धत पनि गर्दछ भने रातीको समयमा ब्यायाम गर्नाले गहन निद्रा पर्दछ । हाँस्नाले मधुमेह, ढाड दुख्ने, तनाव हुने समस्याको लागि निकै लाभदायक पनि मानिन्छ ।
हाँस्नाले वरिपरीको माहोव सहज हुनुको साथै शरिरमा उर्जा समेत बृद्धी हुन्छ ।
एक घण्टा मात्र हाँस्नाले ४०० क्यालोरी शक्ति खपत गर्दछ जस्ले मानिसमा भएको मोटोपनाको समस्यालाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ ।
विदेश जानेले अचानक ज्यान नजावोस भनेर के के सतर्क अपनाउनु पर्छ ? - डा. कल्याणको उपाय
तिनाँउ किनारको गीतमा लुकेका यौन सभ्यता